Ntugharị gam akporo: akụkọ, mmelite, chinchi na ndị ọzọ | Gam akporosis
Anyị niile maara na enweghị ngwụcha Sistem arụmọrụ, na software nke ahụ na-enyere anyị aka ime ka kọmputa ma ọ bụ ekwentị anyị rụọ ọrụ n’enweghị nsogbu. Anyị nwere ike ịchọta ndị kachasị ahụkarị, dị ka Windows, mana enwekwara ndị ọzọ na-anaghị ahụ oge ụfọdụ, dị ka ọ dị ugbu a. android. N’ebe a ị nwere ike ịchọta ihe niile metụtara sistemụ arụmọrụ ugbu a, ndụmọdụ, ozi na ihe niile metụtara ha.
Kwa afọ, gam akporo wepụtara nsụgharị ọhụrụ yana ọtụtụ atụmatụ na mmelite ọhụụ. Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, mmelite na asịrị nke mbipụta na-abịanụ.
Na 2018, ọ bụ afọ 10 kemgbe mmalite nke gam akporo na ahịa. Sistemụ arụmọrụ Google enwewo ọmarịcha mmepe kemgbe ọtụtụ afọ. Ọtụtụ ndị nrụpụta na-eji sistemụ arụmọrụ a, nke a kacha eji eme ihe n'ụwa niile, na afọ ndị gafeworịrị nsụgharị dị iche iche.
Na ụdị ọ bụla nke gam akporo ọ bụla, atụmatụ ọhụrụ na ndozi ndị bụ isi abịarutela sistemụ arụmọrụ. Ọzọ anyị ga-ekwu maka nsụgharị ndị a, ka ị nwee ike nweta nghọta doro anya banyere mmalite o nweela kemgbe ọtụtụ afọ.
Achịcha Akara 1.0
Ejiri usoro izizi rụọ ọrụ nke izizi na Septemba 23, 2008. Ekwentị izizi jiri ya bụ HTC Dream. Sistemu eji arụ ọrụ ezughi oke, mana ị nwere ike ịhụperetụ ihe ọ nwere ike bụrụ oge.
Emebatala ụfọdụ ọrụ ndị ka dị ugbu a, dịka mmekọrịta na Gmail, ngwa Google dịka Maapụ, Kalinda, Ndi ana-akpo, YouTube ma ọ bụ igwe nchọta Google na ihe nchọgharị ahụ. E gosipụtara ndị ahịa gam akporo (ụdị mbụ nke Playlọ Ahịa Google Play). Agbanyeghị na ọnwa mbụ ị nweghị ike ịzụta ngwa.
Na 2009 nile ewepụtara ọtụtụ nsụgharị ndị ọzọ, Achịcha Banana 1.1, Achịcha Akara 1.5 na Donut 1.6. Ọ bụ usoro nke usoro nke etiti nke ewepụtara ọrụ ọhụrụ, na mgbakwunye na ụfọdụ mmelite na interface gam akporo. Ihe dị oke mkpa bụ gam akporo 1.6 Donut, nke gosipụtara ọbịbịa ya na ọha mmadụ. HTC Magic bụ ihe dị mkpa na ekwentị ahụ.
A gam akporo 2.0 / 2.1 Eclair
Na Ọktoba 26, 2009, ụdị nke abụọ nke sistemụ arụmọrụ rutere. Ọtụtụ akụkọ wee soro ya, ọtụtụ n'ime ha ka dị taa. Ebugharịrị ntụgharị na Maapụ Google, ihe nchọgharị ka emegharịrị kpamkpam, ma ihuenyo ụlọ amalitelarị ịhazi ya.
Ntinye nke igodo na Google Maps bu ihe di mkpa maka gam akporo. Ebe ọ bụ na smartphone ahụ ghọrọ ngwaọrụ nke ndị ọrụ nwere ike iji dozie onwe ha ma ọ bụ atụmatụ ụzọ. Ọrụ bụ isi maka ndị ọrụ. Otu n'ime ekwentị nke eji ụdị nsụgharị a bụ Galaxy S. Ọgbọ nke mbụ nke njedebe dị ugbu a nke akara Korea.
Naanị ọnwa ole na ole ka e mesịrị, na May 20, 2010, Froyo bịarutere. N'echiche a, ị nwere ike ịhụ ọrụ Google na-arụ mgbe niile iji melite sistemụ arụmọrụ yana ọrụ ọhụrụ na mgbanwe na imewe. Versiondị a bụ otu n'ime ndị ruru ọtụtụ mmadụ ntị na ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa na kọntaktị mbụ ha na gam akporo.
Nchịkọta Dalvik, iwu olu ma ọ bụ Adoble Flash bụ ndozi ndị bụ isi nke ụdị sistemụ ọhụrụ a hapụrụ anyị. Site na ụdị sistemụ a, HTC Ọchịchọ bịakwara ahịa. Ekwentị nke nwere ọ popularityụ buru ibu n'etiti ndị na-azụ ahịa.
Ná ngwụsị nke 2010 anyị nwere ụdị gam akporo ọhụrụ na ahịa. Ọ bụrụ na ndị gara aga ewereworị nnukwu ụzọ na ọganihu ha na ahịa, ọ nwere ike ịbụ ụdị a bụ mmụba ha doro anya. Ọ bụ nsụgharị kachasị mma nke sistemụ, n'ụzọ ọ bụla. Ma na usoro imewe na ọrụ.
N'ime ya, akwadoro nkwado maka ihe mmetụta dị ka gyroscope ma ọ bụ barometer maka oge mbụ. Na mgbakwunye, maka ọtụtụ ekwentị ọ bụ nsụgharị ikpeazụ ha natara, n'ihi na Google malitere ịkwụsị ịkwado ya. Ọ dịkwa mkpa n'ihi na ya na ya, Samsung Galaxy Note mbụ bịara n'ahịa.
Gam akporo 3.0 Mmanụ acomụ
Machị 2011, naanị ọnwa atọ ka ụdị nke gara aga gasịrị, anyị nwere ụdị ọhụụ nke gam akporo dị njikere. Ọ bụghị ụdị ọ bụla, n'ihi na ọ bịara n'ahịa dị n'etiti mbadamba nkume. N'ihi nke a, e mepụtara ụdị nke sistemụ arụmọrụ nke kwekọrọ na mbadamba.
N'ezie, ụdị 3.0 a bụ naanị dakọtara na mbadamba. O kara akara ntinye nke Google na ngalaba ahịa a. Ọ bụ ụdị edepụtara iji rụọ ọrụ na nnukwu ihuenyo, yana ọrụ na wijetị ọhụrụ, yana ụdị ntanetị dị iche iche. Ọ bụ oge mgbasawanye na ahịa, nke ọtụtụ ụdị jiri ihe egwu were ihe egwu.
Ọtụtụ ọnwa ka e mesịrị, na njedebe nke 2011, kpọmkwem na October 12, 2011, mbipute 4.0 nke sistemụ arụmọrụ malitere. Versiondị gam akporo a kpọrọ iji mee ka ihe niile dịrị n'otu. Maka na enyere ya ekwentị na mbadamba. Ọ kara akara mmalite nke oge ọhụụ maka sistemụ arụmọrụ.
Anya ọ bụ nnukwu mgbanwe maka Google. E gosipụtara atụmatụ ndị dị ka iji wijetị mkpọchi ihuenyo, bọtịnụ ihuenyo, na ike ihichapụ ọkwa na mmegharị ahụ. Ọ na-akara mbata nke gam akporo Doo eze na ahịa. Motorola bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị n'oge a, nwere ụdị dịka Moto RAZR.
Android 4.1 jelii agwa
Versiondị usoro sistemụ ọzọ, nke ewepụtara na June 2012, bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu ugbu a. Na mgbakwunye ịbụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị nwere ọnụnọ kachasị na ahịa n'ụwa niile. Ahụmịhe onye ọrụ gbanwere nke ukwuu, dịka sistemụ ahụ zara ugbu a n'ụzọ dị mmiri karị. Ojiji dị mma karịa.
Iwu olu na mbata Google Ugbu a bụ akụkụ abụọ dị oke mkpa na gam akporo jelii agwa. Amụma ka emeziri ma Project Butter bịakwara, nke nwere nnukwu mkpa na sistemụ ahụ. Sony Xperia Z bụ flagship n'oge a. Ekelere ya igwefoto 13 MP na enweghị mmiri, otu n'ime ekwentị gam akporo izizi na nke a.
Android 4.4 KitKat bụ nsụgharị nke ọtụtụ ndị ọrụ taa hụrụ n'anya. Ọ tọrọ ntọala nke ihe sistemụ taa bụ. Google webatara ọtụtụ teknụzụ ndị bụ isi, nke ka dị na sistemụ arụmọrụ taa. Na mgbakwunye, ọ kara akara mbata nke iwu Ok Google.
Nhazi ahụ gara n'ihu na ntopute ya, jiri nwacha ọcha karịa ma nwee nkasi obi karịa iji interface. Na mgbakwunye, emere ka ndozi dị ka ekwentị ndị dị ala na-arụ ọrụ nke ọma n'oge niile. E tinyekwara ihe ndekọ ederede na ngwaọrụ.
Amalitere na November 2014, ọ bụ otu n'ime nsụgharị ndị a na-eme obi ụtọ pụrụ iche n'etiti ndị ọrụ gam akporo. Ọ bụghị ihe ịtụnanya, n’ihi na ọ bụ otu n’ime ihe ndị mere ka anyị nwee nnukwu mgbanwe. Ihe eji emepụta ihe eji abanye na ya na ụdị sistemụ arụmọrụ a. Ọ bụ nnukwu mgbanwe mbụ ọ hapụrụ anyị.
Ọ pụtakwara ọbịbịa nke ndị nhazi 64-bit ọhụrụ, ebe ọ bụ na Android kwadoro ha ugbu a. E webatara nkwado Multiscreen, Smartlock rutere sistemụ arụmọrụ na n'ikpeazụ, Project Volta rutere.
N'ọnwa Ọktọba 2015, ụdị nke isii nke gam akporo adịworị na ahịa. Versiondị na-aga n'ihu, bụ nke o doro anya na Google enweelarị echiche doro anya banyere ihe ha chọrọ iji nweta sistemụ arụmọrụ. Ma, ịnọgide na-enwe omume nke iwebata ndozi dị mkpa na ya.
Na mbipute a, e kpebiri imeziwanye ihe dị adị na gam akporo. Enweghi mgbanwe dị ukwuu, mana enwere ọtụtụ ndozi, ezubere inye arụmọrụ ka mma. E meziwanye batrị, ikikere ngwa enwere ike ijikwa, yana nchekwa nchekwa dị ebe a. O weghachiri kaadị SD na ekwentị gam akporo. Google Ugbu a kwa webatara Na Mgbata, nke n'ụzọ ụfọdụ guzobere ntọala nke ihe Google Assistant bụ taa.
Verydị na-adịbeghị anya, nke ọnwa ndị na-adịbeghị anya bụ ihe kachasị eji eme ihe n'ụwa niile. Mbata nke Google Pixel fọrọ nke nta ka ọbịbịa ya. Nchọgharị olu bụ otu n'ime igodo nke ụdị gam akporo a. Nakwa ntọala asụsụ. Ọ bụ ezie na ọrụ kachasị atụ anya nke ọtụtụ bụ windo multi-window. Ihe na-abịa na Nougat.
Dị ka nsụgharị gara aga, Google kwadoro na ọ ga-eme ka ọtụtụ akụkụ ndị dị ugbu a na sistemụ arụmọrụ dịkwuo mma. Ọganihu ya dịtụ ntakịrị n'ahịa, ma a mara ya okpueze dị ka nsụgharị nke hapụrụ na ndozi na ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Wepụtara na August 2017, ụdị a nke gam akporo na-ezo aka na ọtụtụ dị ka onye maara ihe ma. Onye nkwado Google kwadoro na Android, na-eme ka o doo anya na ọ bụrụlarị ihe dị mkpa na atụmatụ nke ụlọ ọrụ America. Maka ndị ọzọ, obere ndozi na-abịa na sistemụ ahụ.
Ndozi na emechaghi ihe, mmeghe nke onyonyo onyonyo onyonyo. Na mgbakwunye na ngwa ngwa, nke ị nwere ike ịnwale na-enweghị itinye ha, ihe nwekwara ike ịme egwuregwu. Versiondị nke bịara na ọgbọ nke abụọ nke Google Pixel. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na Pixel 2 XL bụ otu n'ime ụdị zuru oke na nke kachasị mma ewepụtara na gam akporo.
A gam akporo 9.0 achịcha
Versiondị sistemụ kachasị nso nso a, ewepụtara na August 2018. indị nke ọgụgụ isi dị ebe a iji nọrọ na gam akporo. A na-eche na ndị ọrụ jiri sistemụ arụmọrụ n'ụzọ ọhụrụ. Ihe na-egosi na mmegharị ahụ.
Emeziwanye mmelite na njikwa batrị, nchapụta nchapụta. Na mgbakwunye, anyị hụrụ etu ọkwa a siri bụrụ ihe ama ama n’etiti ekwentị. Ihe na-amanye usoro na ngwa ọdịnala ka ọ gbanwee maka usoro ọhụụ a na Android smartphones.
por Ignacio Sala eme Ọnwa 3 .
Ụzọ kachasị mma iji kporie ndụ gam akporo na PC abụghị site na iji emulators dị ka BlueStacks, mana ...
Beta mbụ nke gam akporo 12 adịlarị anyị niile nwere ọtụtụ akụkọ na-atọ ụtọ, gụnyere redesign nke ...
N'oge Google I / O 2021, Google eweputara nsụgharị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ ya, gam akporo 12. Na…
por Ignacio Sala eme Ọnwa 12 .
Ihe ejiri mara gam akporo bu nkewa, n’ihi nleghara anya nke otutu ndi n’eme ihe mgbe ...
Otu n'ime nsogbu ndị ọrụ gam akporo na-eche bụ nkewa, nsogbu nke obere ...
Na mbido Septemba, Google weputara nsụgharị ikpeazụ nke gam akporo 11, ụdị nke na-eji nwayọ nwayọ abịa ...
Gam akporo 11 dị ebe a mgbe ọnwa ndị ahụ gachara na nyocha ndị nrụpụta na ihe anyị gara ...
Ndepụta ndepụta nke ekwentị Xiaomi nke ga-emelite na gam akporo 11
Xiaomi kesara site na nzukọ ya na ekwentị nke ga-emelite gam akporo 11 na ...
Android 11 agaghị egosiputa onyonyo album anyị na-egwu na mkpọchi mkpọchi
Sistemụ arụmọrụ ọ bụla nwere ụdị nhọrọ dị iche iche, yana Android bụ onye meriri site na mbu. Dị ka onye ọrụ gam akporo ...
Google amalitela ịhapụ beta nke gam akporo 11 na nhazi nhazi nke ngwaọrụ na-ekpughe ...
Mmelite a na gam akporo Oreo na-akpata ọdịda na Xiaomi Mi A1
Nwere ike iche n'echiche gam akporo na-enweghị Google? Eelo nwere ike ime ka ọ bụrụ eziokwu
Android 8.1 atụmatụ. Oreo amachaghị nke ndị ọrụ
Full ndepụta nke Samsung igwe na ga-imelite gam akporo Oreo
Android 8.1 Oreo Ọ bụ ọrụ! | Anyị na-egosi gị akụkọ ya niile
Igodo-igodo na nọmba ụlọ mgbe ị wụnye Nougat na Huawei P9 Lite? Lee azịza ya